Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) - Hello Sayarwon
Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်)
Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) ကဘာလဲ။
မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်သည် မွေးရာပါ ကစီဓါတ်အလုပ်လုပ်မှု မကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ယောကျာ်းလေးများတွင်သာဖြစ်တတ်သည်။ ခန္ဓါကိုယ်ရှိ အရိုး အရေပြား အရွတ် နှင့် အခြား တစ်သျူးများကိုတည်ဆောက်ပေးသည့် သကြားကိုမဖြိုခွဲနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသကြားဓါတ်သည် ဆဲလ်ထဲတွင် တည်ဆောက်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်အနှံအပြား ဦးနှောက်ပါအပါအဝင်ကိုပျက်စီးစေသည်။ ဖြစ်ပေါ်ပုံသည် လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတူနိုင်ပါ။
Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာအလွန်အဖြစ်နည်းပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ပါး ကြီးပြီး ဝိုင်းခြင်း
အဆစ်ပြသာနာများကြောင့် လက်ဖဝါးတွင် ထုံခြင်းအားနည်းခြင်း
ချောင်းဆိုးခြင်း အအေးမိခြင်းနှင့် လည်ချောင်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
အသက်ရူလမ်းကြောင်းပြသာနာများ ညဘက်တွင် အသက်ရူရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အိပ်နေချိန် အသက်ရူရပ်ခြင်း
ဝမ်းနှင့်ပတ်သတ်သောပြသာနာ ဥပမာ ဝမ်းလျောခြင်း
အကယ်၍ ကောင်လေး၏ ဦးနှောက်ကိုထိပါက အောက်ပါအခြေအနေများတွေ့နိုင်သည်။
အသက်နှစ်နှစ်မှ လေးနှစ်တွင်အတွေးအခေါ် သင်ယူမှုပြသာနာများဖြစ်ခြင်း
အပြုအမူဆိုင်ရာပြသာနာများ ဥပမာ ထိုင်နေရန်ခက်ခဲခြင်း ရန်မူခြင်း
Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရောဂါရှိသောယောက်ျားလေးသည် ပရိုတင်းအားမလုပ်နိုင်ပေ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမေထံမှ ရသော ဒီအန်အေ ဟုခေါ်သော မျိုးရိုးဗီဇ တွင်ပြသာနာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဖေထံတွင် မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ် ရှိပါက သမီးထံသို့ဗီဇ ရောက်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း ရောဂါမဖြစ်ပေ။ သို့သော်အမေ့ထံတွင်ပါရှိပါက ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အခြားရောဂါမဟုတ်သည်ကို ဆရာဝန်မှ အရင်ဖယ်လိမ့်မည်။ ဆရာဝန်မှအောက်ပါတို့ကိုမေးနိုင်သည်။
ဆရာဝန်မှ လက္ခဏာ၏အခြားအကြောင်းကိုမရှာနိုင်ပါက မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်ကိုအောက်ပါတို့လုပ်ပြီးစမ်းသက်လိမ့်မည်။
သူ့သွေး သို့မဟုတ် အရေပြားဆဲလ်တွင် ပျောက်နေသောပရိုတင်းရှိမရှိ။
မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်ဟုသေချာပါက မိသားစုအတွင်း မျိုးရိုးပြသာနာများကိုရှာသင့်သည်။
သင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ပြီး မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်ရှိသောကလေးရှိခြင်း သို့မဟုတ် မိမိတွင် ဗီဇရှိေကြောင်းသိရှိပြီးပါက ခုကလေးတွင်ရှိမရှိစမ်းသက်နိုင်သည်။ စောစောစမ်းသက်နိုင်ရန်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Mucopolysaccharidosis Type ii (မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
စောစီးစွာကုပါက အချို့ ကြာရှည်စွာပျက်စီးမှုများကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
အင်ဇိုင်းပြန်ဖြည့်ပေးခြင်းေကြာင့် ရောဂါဖျော့သောမျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ် ရှိသည့်ယောကျာ်းလေးများတွင်ရောဂါပိုဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ ခန္ဓါကိုယ်မှမထုတ်ပေးနိုင်သော ပရိုတင်းကိုပြန်ဖြည့်ပေးသည်။ ထိုကုသမှုကြောင့်အောက်ပါတို့ပိုကောင်းစေသည်။
လမ်းလျောက်ခြင်း လှေကားတက်ခြင်းနှင့် အထွေထွေအခြေအနေကောင်းစေခြင်း
ဦးနှောက်မထိသောသူများတွင် ထိုကုသမှုကိုပထမဆုံးပြုလုပ်သည်။ဦးနှောက်ရှိ ရောဂါကိုမနှေးစေပါ။
ရိုးတွင်းချည်ဆီနှင့် ချက်ကြိုးရှိသွေးကိုအစားထိုးခြင်း။ ထိုသို့အစားထိုးခြင်းကြောင့် ကလေးခန္ဓါကိုယ်အတွင်းသို့ ဆဲလ်များကိုသယ်ဆောင်ပေးပြီး ထိုဆဲလ်များက ပျောက်နေသော ပရိုတင်းကိုပြန်လုပ်ပေးသည်။ ထိုဆဲလ်အသစ်များက ကလေးဆဲလ်နှင့်တူသော ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ အလှူရှင်သို့မဟုတ် ချက်ကြိုးသွေးမှရသောဆဲလ်များမှ ရယူသည်။
ကုသမှုနှစ်ခုလုံးသည် အန္ဓါရာယ်များသည်။ အခြားကုသမှုများအရမှ သူတို့ကိုသုံးသည်။ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုရှိပြီးပါက အသုံးမဝင်ပါ။
ပိုပြင်းထန်သော မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်ရှိသောယောက်ျားလေးများအတွက် ပိုထိရောက်သောကုသမှုများကိုလေ့လာနေသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသခြင်း။ ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတော်တော် များများကိုထိခိုက်စေသော်ကြောင့် ဆရာဝန်တော်တော်များများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
နား နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းဆရာဝန်
ဆေးကုသခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ခြင်း ကြောင့်အချို့သော နောက်ဆက်တွဲများကိုဖြစ်စေတတ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုများက အရိုး ကြွက်သားပြသာနာများကိုကူညီနိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးကြောင့် အိမ် ကျောင်းတွင်ပို အဆင်ပြေစေသည်။ မယ်လက်တိုနင် ကဲ့သို့ဆေးကုသမှုကြောင့်အိပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောပြသာနာကိုသက်သာစေသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်ကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့်မျူကိုပေါ်လီ ဆက်ခရိုက်ဒိုးစစ် ပုံစံနှစ်ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်နေပါ။ အကောင်းဘက်ကမြင်ပါ။ အခြားသောသူများကမည်သို့ပြောရမည်မသိဖြစ်တတ်သောကြောင့် သူတို့အားစိတ်ရှင်းရှင်းနှင့်ပေါင်းပါ။
သူအား လူတယောက်ကဲ့သို့ဆက်ဆံပါ- သူ့စိတ်ဝင်စားမှု သိလိုမှု နှင့် သူ့အနေနိုင်မျ ားကိုလေးစားပါ။ သူဘာလိုအပ်လဲ သူ ဘာလုပ်နိုင်သလဲ ထိုအတွက်ဘာကူနိုင်သလဲစဉ်းစားပါ။
အဆစ်ကိုကျုံဆန့်သောလေ့ကျင့်ခန်းပါလုပ်ပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆရာကုသသောဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ကိုင်ရလွယ်သော ကိုက်ရင်မပျက်သော အရုပ်ကြီးကြီး မျိုးပေးပါ။
သူငယ်ချင်းတည်ဆောက်မှုကိုအာပေးပါ။ ကလေးများနှင့် (သို့မဟုတ် သူတို့မိဘများနှင့်) မိမိသားအား မည်သို့ဆက်ဆံသင့်ကြောင်းရှင်းပြပေးပါ။ လက်တွဲလမ်းလျောက်ခိုင်းပါ။ အခြားကလေးများနှင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရန် မရိုက်ရန် ပြောပြသည်။ သို့သော ကလေးကကလေးသာဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် စခြင်း စိုက်ကြည့်ခြင်း ခံနိုင်အောင်ပြောပြပေးပါ။
သင်ယူမှုကိုကူညီပေးပါ။ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် သင်ယူခိုင်းပါ။ ကျောင်းသွားပါက တစ်ဦးချင်းပညာရေးစနစ်မှ ဝန်ထမ်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ သင့်ကလေးသည် တစ်ဦးချင်းအာရုံစိုက်ပေးရသောအတန်း အထူးပြုလုပ်ထားသောထိုင်ခုံနှင့် အခြားအရာများညှိရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
သင့်မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးပါ။ ဂရုစိုက်ရသောတာဝန်ကို အခြားသူအားခဏပေးနိုင်သည်။ အနားယူပြီး ပြန်လုပ်ပါ။
Hunter Syndrome (MPS II). https://www.webmd.com/children/hunter-syndrome-mps-ii. Accessed October 27, 2017.
Mucopolysaccharidosis type II. https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6675/mucopolysaccharidosis-type-ii. Accessed October 27, 2017.